Kutanga Center Pro iri kutengeswa kwenguva shoma | IPhone nhau
Kutanga Center Pro iri kutengeswa kwenguva yakati rebei
Kana zhizha rasvika, vazhinji ndivo vanogadzira avo vanotipa isu kunyorera kwavo mahara kana kutipa isu chakakosha mutengo pamutengo wacho. Maawa mashoma apfuura, Isu takakuzivisa iwe nezveiyo Infinity Blade trilogy, kuti isu tinokwanisa download zvachose mahara Nguva Yakatemwa.
Ino nguva mugadziri weLaunch Center Pro, inotipa 60% dhisikaundi pane chako chikumbiro, kunyorera uko kune mutengo wenguva dzose we4,99 euros. Kutanga Center Pro kunotimisikidza muhwindo rimwe chete maapplication atinoshandisa zvakanyanya kuwedzera pakukwanisa kudzokorora mabasa nemuchina mumwe chete.
Tumira SMS kumukadzi wedu achiti tichanonoka, tumira email kuna shefu vedu tichiti tiri kupedzisa basa, tsvaga iri pedyo shopu yekofi kuburikidza neYelp, vhura kamera yakananga kuburikidza ne Instagram, tarisa tembiricha yeiyo thermostat Nest kuburikidza ne IFTTT, fona kana FaceTime, ita otomatiki kutsvaga muSafari kana Google, tarisa barcode uye tsvaga Amazon, tsvaga Wikipedia, shanyira webhusaiti yedu yaunofarira ... tinogona kuita zvese izvi nemuchina wakapfava pachiratidziri.
Ichi chishandiso chakanakira kana isu tichigara tichiita zvakafanana mabasa mazuva ese pane yedu iPhone, nekuti inotibvumidza kumisikidza chero chiito chinoitika kwatiri. Kutanga Center Pro inomhanya kumashure Naizvozvo, kana tikashandisa kubatana kweGPS kazhinji, kunwiwa kwebhatiri kunogona kudzikiswa zvakanyanya.
Iye zvino tinogona kurodha kunyorera kwe1,99 euros, kana mutengo waro wenguva dzose uri 4,99 euros, saka inguva yakanaka kana iwe wanga wakamirira kudzikiswa muchikumbiro kuti uwane. Kutanga Center Pro kuri muChirungu chete, asi mashandiro ayo akapusa uye haadi ruzivo rwakawanda rwemutauro. Inoda iOS 8.0 kana yepamusoro uye inoenderana neiyo iPhone, iPad uye iPod touch.
Kutanga Center Pro - Icon Mugadzirivakasununguka
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Kutanga Center Pro iri kutengeswa kwenguva yakati rebei
Iyo yazvino yePrereate yekumisikidza yakatakurwa nezvinhu zvitsva
iTransmission 5 yave kuwanikwa muCydia nerutsigiro rweIOS 9